Ampidino PowerISO ho an'ny Windows
PowerISO dia iray aminireo fitaovana famoronana kapila virtoaly mahomby indrindra azonao jerena rehefa miresaka rakitra rakitra CD, DVD na Blu-Ray.
PowerISO aminny ankapobeny dia rindrambaiko natao hamaly ny filanao rehetra momba ny fisie modely toa ny ISO, BIN, NRG, CDI, DAA sns. Aminny alàlanny fampiasana PowerISO dia azonao atao ny mahita ny atinny fisie sary iSO nefa tsy mamorona kapila virtoaly ianao ary mamoaka ireo atiny ireo aminny lahatahiry nofaritanao. Ny programa dia manolotra fampiononana lehibe ho anireo mpampiasa aminity asa ity. Miaraka aminny Power ISO, izay mametraka ny hitsin-dàlana aminny menus konteks Windows misokatra aminny tsindry havanana, azonao atao ny manondrana ny atiny aminny fipihana tsara ireo rakitra sary.
Mamela anao handoro kapila, handoro DVD, handoro Blu-Rays, sns. Aminny PowerISO, azonao atao ny mamorona CD mozika avy amina rakitra audio voatahiry ao aminny solosainao, toy ny MP3, FLAC, APE, WMA. Mifanohitra aminizany no izy, azonao atao ny manangona ireo hira aminny kapila mozika ao aminny solo-sainao aminny endrika voatondro.
Miaraka aminny PowerISO, azonao atao ihany koa ny mamorona rakitrao modely aminny endrika iSO sy BIN. Azonao atao ny mampiasa ny kapila CD, DVD na Blu-Ray-nao ho loharanonity asa ity, ary koa ireo rakitra voatahiry ao aminny kapila mangaraharao. PowerISO dia mamela anao hanova sy manova ny atinny sary ISO ihany koa.
Azonao atao ny mametraka ny rakitrao ao anaty kapila virtoaly izay noforoninao taminny PowerISO ary hampiasa ireo rakitra sary ireo aminny solo-sainanao matetika nefa tsy hodorana aminny kapila CD, DVD na Blu-Ray.
Izy io koa dia ahafahanao manova ireo rakitra PowerISO ho endrika hafa. Ny programa dia afaka mamadika ny sary BIN ho ISO ary koa manova ireo rakitra sary hafa ho ISO.
Azonao atao koa ny mamorona kapila USB azo soloina aminny PowerISO. Aminny fampiasana anio endri-javatra io dia azonao atao ny mamorona kapila USB azonao ampiasaina hametrahana Windows aminny alàlanny USB. Toy izany koa, afaka mamorona kapila CD sy DVD azo sintomina ianao.
Fanamarihana: Ny programa dia miaraka aminny tolotra fametrahana rindrambaiko fanampiny. Tsy mila mametraka ireo rindrambaiko fanampiny ireo ianao mba hampandeha ilay programa.
Fanavaozana farany: 09-07-2021